Ka soo cesho E-mayllada Muuqaalka dirawalada & diskiga
DataNumen Outlook Drive Recovery waa qalab awood leh oo si toos ah uga soo ceshan kara emails-ka Outlook iyo walxaha kale ee ka soo baxa dirawalada & diskiyada. Ilaa intaad ku keydisay faylalka 'Outlook PST' dirawallada maxalliga ah ama cajaladaha waagii hore, ka dib sabab kasta oo aadan u heli karin xogta Muuqaalka, waxaad had iyo jeer u isticmaali kartaa aaladdan sixirka ah si ay xogta kuugu soo kabato.
Fiiro gaar ah: Haddii feylka 'Outlook PST' wali ka jiro diskigaaga ama wadistaada, markaa fadlan isticmaal DataNumen Outlook Repair inuu ka soo ceshado emaylka iyo walxaha kale feylka PST.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,627 cod)
maxaad DataNumen Outlook Drive Recovery?
In HDD ah runti khalkhalsan (double formatted) ahaa soo kabasho kaamil ah.
Qalab sameeya waxa rajo leh!
Injineer howl gab ah
Febraayo 27, 2021
Xalka Xaaladaha Caadiga ah ee La Socda:
Tirtir feylasha Muuqaalka .pst kadibna faaruq Recycle Bin si qalad ah.
Si joogto ah u tirtir faylasha Muuqaalka .pst si qalad ah.
Qaab qaab ah oo ay ku jiraan faylasha Muuqaalka .pst si qalad ah.
Tirtir xijaab ka kooban faylasha Muuqaalka .pst si qalad ah.
Dib-u-qaybinta diskiga qalad iyo lost wadista ay ku jiraan faylasha .pst.
Lama aqrin karo wadaha ama diskka ay kujiraan feylasha .pst cillad dhanka qalabka ah awgeed.
Darawalka ama diskka ay ku jiraan faylasha pst ma noqon karaan starla aqoonsan yahay ama loo aqoonsan yahay musuqmaasuqa ka jira MBR, miiska qaybinta ama sababo kale awgood.
Dhammaan kiisaska kor ku xusan, iyo kiisas kale oo kasta oo aadan heli karin xogta Muuqaalka ee ku keydsan darawalladaada ama diskigaaga maxalliga ah, waxaad had iyo jeer maciinsan kartaa DataNumen Outlook Drive Recovery.
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Outlook Drive Recovery v8.5
Taageer 32bit iyo 64bit Muuqaalka 97 ilaa 2019 iyo Muuqaalka Xafiiska 365.
Taageero inuu ka soo kabsado farriimaha boostada, fayl, posts, ballamaha, codsiyada kulanka, xiriirada, liisaska qeybinta, howlaha, codsiyada howlaha, joornaalada iyo qoraalada. Dhammaan guryaha, sida mawduuca, laga bilaabo, laga bilaabo, cc, bcc, taariikhda, iwm, waa la soo helay.
Taageer si aad ugu soo ceshato farriimaha boostada ee qoraalka cad, RTF iyo HTML.
Taageero si loo soo cesho lifaaqyada, oo ay ku jiraan dukumiintiyada iyo sawirrada ku lifaaqan farriimaha oo gundhig u ah jirka HTML.
Taageero si loo soo cesho walxaha gundhigga ah, sida Shaqooyinka 'Excel Worksheets', Dukumiintiyada ereyga, iwm.
Taageero inuu ka soo kabto waxyaabaha la tirtiray ee Muuqaalka, oo ay ku jiraan farriimaha boostada, fayl, bosts, ballamaha, codsiyada kulanka, xiriirada, liisaska qeybinta, howlaha, codsiyada howlaha, joornaalada iyo qoraalada.
Taageero si looga soo kabsado xogta Muuqaalka dirawalada ama diskiga ilaa 16777216 TB (yacni 17179869184 GB).
Taageer in loo qaybiyo faylka PST wax soo saarka dhowr faylal yaryar.
Taageero si looga soo kabsado xogta Muuqaalka ee leh ilaalinta erayga sirta ah, labadaba sireed la isku halleyn karo iyo sir badan (ama ugu fiican) ayaa la taageerayaa. Xogta Muuqaalka waa la soo ceshan karaa xitaa haddii aadan haysan lambarka sirta ah.
Taageero si loo soo saaro faylka PST go'an qaab Muuqaalka 97-2002 iyo qaabka Muuqaalka 2003-2016.
Taageero si looga soo kabsado xogta Muuqaalka nooc kasta oo ka mid ah darawallada ama diskiyada, sida disk-yada adag, flash-ka, diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero inuu ka soo kabsado xogta Muuqaalka nooc kasta oo nidaamyada faylka ah, sida FAT, FAT32, NTFS, Linux Ext2, Linux Ext3, iwm.
Taageer inuu ka soo kabsado xogta Muuqaalka warbaahinta kharribmay.
Taageero si loo soo kabsado qayb ka mid ah drives iyo saxannada.
Waxaa loo isticmaali karaa qalab kumbuyuutareed iyo dembi baaris elektaroonig ah (ama e-daahfurka, eDiscovery).
Isticmaalka DataNumen Outlook Drive Recovery inuu ka soo kabsado Xogta Muuqaalka
Ilaa iyo inta aad ku keydisay xogta Muuqaalka gaarigaaga ama diskigaaga, ka dib sabab kasta oo aadan u soo ceshan karin ama u geli karin xogtaada Muuqaalka, marwalba waad isticmaali kartaa DataNumen Outlook Drive Recovery si aad uga soo ceshato emayllada 'Outlook' iyo walxaha kale dirawalada ama saxannada adiga loogu talagalay.
FIIRO GAAR AH: WAQTIGII AY MUSIIBADA MACLUUMAADKAAGA KU DHACAYAAN MACLUUMAADKAAGA DIB LOOGU SOO DHAWEEYAY DALKA SOO SAARKA AMA DIISKA, FADLAN HA QORIN AMA HA ISBADALIN QAAR KASTA OO KU SAABSAN DARAJISTA AMA WAX KASTA OO KALE. DODR KELIYA AYA KA AKHRI KARI KARTAA MACLUUMAADKA WADAAN AMA DUKAAN WELIGUNA MA QORI DOONO AMA MA BEDELI DOONTO MACLUUMAAD KASTA
Fiiro gaar ah: Dib u soo kabashada ka hor, fadlan xir Microsoft Outlook iyo wixii kale ee codsi ah.
Haddii wadista macquulka ah ee feylashaada Muuqaalka ee 'Outlook pst' ay asal ahaan ku keydsan yihiin ay wali jirto oo cabirkeeda ama goobta uu ku yaal aan weli la beddelin, markaa fadlan dooro wadistaas si loo baaro:
Haddii kale, haddii darawalka macquulka ahi aanu jirin wax intaa ka badan, sababtuna tahay dib-u-qaybinta diskiga, lost ee MBR ama macluumaadka qormooyinka, ama sababo kale oo kasta, ama darawalka macquulka ah ayaa dib loo habeeyay ama loo raray qalab kala qayb ah sida Partition Magic, markaa waa inaad dejisaa dhammaan disk-ka adag ee keydinaya faylasha pst sida isha isha lagu baaro:
Haddii aad ku xirto ama aad ka soo baxdo disk la saari karo kombiyuutarkaaga kadib DataNumen Outlook Drive Recovery la bilaabay, markaa waad riixi kartaa badhanka si aad ugu cusbooneysiiso darawalka iyo liistada diskiga sanduuqa combo.
Haddii aad ogtahay nooca ilaha xogta Muuqaalka si loo soo kabsado, markaa waad ku cayiman kartaa sanduuqa isku-dhafan diskka agtiisa ama sanduuqa combo-ga. Haddii aad uga tagto qaabka "Auto Determined", markaa DataNumen Outlook Drive Recovery wuxuu baari doonaa xogta Muuqaalka Muuqaalka si loo ogaado qaabkeeda si otomaatig ah. Hase yeeshe, tani waxay qaadan doontaa waqti dheeri ah.
Fadlan cadee wax soo saarka magaca faylka go'an. Inta lagu jiro hawsha soo kabashada, DataNumen Outlook Drive Recovery wuu ka soo ceshan doonaa dhammaan xogta Muuqaalka diskiga ama wadista aad dooratay, ka dibna ku keydi xogta soo kabtay feylal cusub oo magacan wata.
Waxaad si toos ah ugu soo dari kartaa wax soo saarka magaca faylka go'an ama riix badhanka si aad u caleenta u xulato feylka.
FIIRO GAAR AH: SI AAD UGA HORTAGTO INAAD KUGU SOO BULSHO MACLUUMAADKAAGA DIINTA AH EE KU SOO SAAR DARKA AMA DHAQANKA, FADLAN HA KU XULIN MAGAC FILE AH OO LAGU SAMEEYO OO KU SAABSAN DIIDKA AMA DUKA.
Waxaad sidoo kale qeexi kartaa qaabka feylka wax soo saarka sanduuqa combo . Haddii aad uga tagto qaabka "Awood Gaar Ah", markaa DataNumen Outlook Drive Recovery soo saari doonaa faylal go'an sida ku cad nooca Muuqaalka lagu rakibay kombuyuutarkaaga.
Click ah batoonka, iyo DataNumen Outlook Drive Recovery doonaa start iskaanka wadista la soo xulay ama diskiga, iyo ka soo kabashada emayllada iyo walxaha kale. Bar horumarka
waxay muujin doontaa horumarka soo kabashada.
Kadib nidaamka dib u soo kabashada, haddii xog kasta laga soo kabto wadista ama diskka si guul leh, waxaad arki doontaa sanduuqa fariinta sidan oo kale:
Hadda waxaad furi kartaa faylka go'an ee PST ee Microsoft Outlook. Dhamaan galka galkiisararchy dib ayaa loogu dhisi doonaa feylka PST ee go'an waxyaabihiina waa la soo kabsaday waxaana lagu ridayaa galka ay ku jiraan. Wixii loogu talagalay lost & walxaha la helo, waxaa lagu ridi doonaa fayl sida Recovered_Group1, Recovered_Group2, iwm.
Isbaanish, Faransiis, Jarmal, Talyaani, Boortaqiis, Ruush, Jabbaan, Kuuriyaan iyo Shiine fudud.
DataNumen Outlook Drive Recovery 7.8 waxaa la sii daayay Diseembar 24, 2020
DataNumen Outlook Drive Recovery 7.6 waxaa la sii daayay Nofeembar 7th, 2020
Hagaajinta heerka soo kabashada.
DataNumen Outlook Drive Recovery 2.0 waxaa la sii daayay Febraayo 5, 2014
Hagaajinta xawaaraha soo kabashada.
Yaree isticmaalka xusuusta inta lagu gudajiro hawsha soo kabashada.
Taageerada Muuqaalka 2013.
DataNumen Outlook Drive Recovery 1.5 waxaa la sii daayaa 15da Diseembar, 2010
Hagaajinta sawirka iyo xawaaraha soo kabashada.
Iska yaree isticmaalka xusuusta inta lagu jiro hawsha soo kabashada.
Kahortag inaad ka soo kabato nuqullada nuqulka ku jira geeddi-socodka soo kabashada.
Taageero si aad u soo ceshato waxyaabo badan oo shay ku jira.
Taageero si aad u soo kabato oo aad u beddesho guryaha qiimaha badan leh.
Hagaajinta ogaanshaha qaladka, farsamaynta iyo habka warbixinta.
Taageer Microsoft Outlook 2010.
Ku hagaaji iswaafajinta nidaamka Windows 9x.
Advanced Outlook Data Recovery 1.0 waxaa la sii daayay Oktoobar 21, 2009
Taageerada Muuqaalka 97, 98, 2000, 2002, 2003 iyo 2007.
Taageer Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista iyo Windows 7.
Taageero si loo soo saaro faylka PST go'an qaab Muuqaalka 97-2002 iyo qaabka Muuqaalka 2003/2007.
Ka soo ceshano farriimaha iyo waxyaabo kale faylasha keydka qad la'aanta ah ee Microsoft Exchange agoon ama waxyeelo soo gaadhay (.ost)
Ka soo cesho emaylka la tirtiray ee Outlook Express faylasha dbx.
Ka soo cesho emayllada musuqmaasuqa Outlook Express faylasha dbx iyo mbx.
Dayactir iyo soo kabashada faylasha xogta Microsoft Outlook ee musuqmaasuqa ah (.pst).